စက်ရုံအခြေပြုဖြည့်စွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အဂတိလိုက်စားမှုကိုတိုက်ခြင်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2021 Sylvia ဂျိမ်းစ် ဘ‌‌လော့ခ်, အသားပေးသတင်းများ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
လေ့လာမှုများအရစက်ရုံအခြေပြုအပိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသူများသည်အဝလွန်ခြင်း၊ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါစသည့်နာတာရှည်ရောဂါများစွာ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
အပင်ပရိုတိန်းများစွာ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့သည်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းယုံမှားသံသယကင်းစွာဖယ်ရှားခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောပရိုတင်းဓာတ်များကိုစားသုံးခြင်းအတွက်အတားအဆီးများကိုရှင်းလင်းစေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအပင်ပရိုတင်းများသည်ကာယလေ့ကျင့်သူများအကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်အပင်အခြေပြုပရိုတိန်းများအတွက်စျေးကွက်သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၄.၃ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တန်ဖိုး ၈.၃ ဘီလီယံရှိခဲ့သည်.
၁။ အမျိုးသားများတွင်အမျိုးသမီး Char လက္ခဏာများကိုဖန်တီးသည်။ အပင်ပရိုတိန်းများသုံးစွဲခြင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောစိုးရိမ်မှုတစ်ခုမှာပဲပိစပ်သည်အမျိုးသားများတွင်အမျိုးသမီးများ၏စရိုက်လက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအယူအဆမှားခြင်းဖြစ်သည်။ Whey ကဲ့သို့ပုံမှန်ပရိုတင်းများနှင့်မတူဘဲပဲပိစပ်တွင် phytoestrogens ဟုခေါ်သောဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုရှိပြီးအီစထရိုဂျင်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆင်တူသည်။ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အက်စထရိုဂျင်အကြားဟော်မုန်းမညီမျှမှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း၊ phytoestrogen သည်သိသိသာသာမစားပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာမရှိပါ။
၂။ အပင်ပရိုတင်းများတွင်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များပြားစွာပါဝင်သည်။ ပဲပင်များသို့မဟုတ်အစေ့များမှရသောပရိုတိန်းများသည်အသားများထက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသည်။ ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအမိုင်နိုအက်စစ်ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်စေရန်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အများစုကိုဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
3. လုံလောက်သောပရိုတိန်းများမထားပါနဲ့။ စက်ရုံအခြေပြုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးအများဆုံးဒဏ္ofာရီတစ်ခု။ ဤအဖြည့်စွက်ချက်များစွာသည်တိရိစ္ဆာန်အခြေပြုပရိုတိန်းဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုပမာဏနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
၁။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း \_ t ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်အဆီလျှော့ချခြင်းနှင့်ရုန်းကန်နေရသောလူများအတွက်စက်ရုံအခြေပြုပရိုတင်းများသည်သွားလာရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဖြည့်စွက်ဆေးများထက်ပြည့်နှက်နေသည့်အဆီနှင့်ကယ်လိုရီလျော့နည်းမှုကြောင့်အပင်အခြေခံသည့်ဖြည့်စွက်အစားအစာများသည်ဖိုင်ဘာပါဝင်မှုမြင့်မားပြီးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများရှိသည်။ ၎င်းသည်ပိုလျှံသောကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်လူတစ် ဦး ၏အစားအစာ၏နေ့စဉ်အာဟာရဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းများကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည်။
တိရိစ္ဆာန်အခြေပြုပရိုတိန်းများတွင်ဂလူးနင်နှင့် whey စသည့်ဓာတ်မတည့်သောဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသည်။
၂။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်လျှော့ချနိုင်သည်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းများနှင့်ရုန်းကန်နေရသူများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်အစားအစာတွင်အပင်ပရိုတင်းဓာတ်များဖြည့်တင်းနိုင်သည်။ ဤဖြည့်စွက်ဆေးများသည်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်ကိုလက်စထရောပါဝင်မှုကိုလျှော့ချပေးပြီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အဆီနည်းသောအဆီပါဝင်မှုနှင့်အတူအပင်အခြေပြုဖြည့်စွက်ဆေးများသည်တစ် ဦး ချင်းစီအားတိရိစ္ဆာန်အခြေပြုပရိုတိန်းများထက်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ရည်မှန်းချက်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာအောင်မြင်ရန်ကူညီသည်။
၃ ။ Nuzest Clean Lean Protein ကဲ့သို့စက်ရုံအခြေပြုသန့်ရှင်းသောပရိုတိန်းဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ ခုအားလုံးပါဝင်သည်။
၄။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - တိရိစ္ဆာန်အခြေပြုပရိုတိန်းများတွင်ဂလူးနင်နှင့် whey စသည့်ဓာတ်မတည့်သောဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသည်။ ၎င်းသည် Lactose ကိုသည်းမခံသောသူများအတွက်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသောလူများသည်စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲစက်ရုံအခြေပြုဆေးဝါးများသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ gluten-free ပါဝင်သောကြောင့်၎င်းဖြည့်စွက်ဆေးများသည် hypoallergenic များဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများခံစားနေရသောသူများအတွက်အစားအစာနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကြသည်။
၅ ။ အပင်ပရိုတင်းများသည်အလွန် fibrous များဖြစ်ကြသည်။ ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသောသူများသည်အစာခြေလမ်းကြောင်းများ၏ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ပျော်ဝင်နေသောအမျှင်များသည်အစာစားပြီးလျှင်အစာကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်အောင်ကူညီပေးသည်။ အပင်ပရိုတိန်းများသည်ပြည့်ဝမှုကိုရရှိသည့်သဘာဝနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါသည်။
၆ ။ တိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းများသည်ခဏတာပြီးနောက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုခံစားရစေသည်။ စက်ရုံအခြေပြုဖြည့်စွက်ဆေးများကသူတို့ကိုနောက်အစာမစားမှီတိုင်အောင်ဖြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အစာခြေကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြည့်စွက်ဆေးများတွင်ပါဝင်သောဖိုင်ဘာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သူတို့သည်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်။ အစားအသောက်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုစစ်ဆေးကြသည်။
၇ ။ လေ့လာမှုများအရစက်ရုံအခြေပြုအပိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသူများသည်အဝလွန်ခြင်း၊ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါစသည့်နာတာရှည်ရောဂါများစွာ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းတို့သည်ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအပါအဝင်အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးအတွက်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်။
၈ ။ အပင်အခြေပြုဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသူတို့၏အစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းလေ့ရှိသောသူများသည်အသားအခြေခံပရိုတိန်းအသုံးပြုသူများထက် ပိုမို၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်။ သက်သတ်လွတ်ပရိုတိန်းအသုံးပြုသူများသည်ဆရာဝန်များကိုမကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်ပြီးညစ်ညမ်းမှုနည်းသောဒေသများတွင်နေထိုင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးအကျိုးရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝပုံစံတစ်ခုအတွက်လူတို့သည်အသားအခြေပြုအပင်အခြေခံသောအော်ဂဲနစ်ဖြည့်စွက်ဆေးများသို့ပြောင်းသည်။
အများပိုင်သတင်း အစားအသောက်များ ကျန်းမာရေး အစာအာဟာရ